Izilwane ezifuywayo ezinobungani, ikhaya elihle elivulekile, igceke elibiyelwe - I-Airbnb
Izilwane ezifuywayo ezinobungani, ikhaya elihle elivulekile, igceke elibiyelwe
Cumberland, Maryland, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sean
U-Sean unokuphawula okungu-471 kwezinye izindawo.
Indawo ebanzi, enomlando, enobungani nezilwane ezifuywayo, ikhaya lezitini. Leli khaya linamakamelo okulala ama-3, igumbi lokudlela elikhulu negumbi lokuhlala, kanye nendawo enhle yangaphandle. Ingaphandle inegceke elibiyelwe ngemuva (elilungele izinja nezingane), elinendawo yokucima umlilo nezihlalo ezitholakalayo, kanye novulandi ongemuva ovela ekhishini obheke ngemuva, olungele ukudla kwangaphandle, kanye nompheme omkhulu ongaphambili. Izitezi zokhuni zangempela nezici kulo lonke ikhaya. Ikhishi eliphelele elinomshini wokuwasha izitsha, iwasha / isomisi, nendawo yokupaka engaphandle komgwaqo.
Le ndlu iyikhaya lezitini elinomlando. Ivulekile, kodwa ithokomele futhi inezici ezithandekayo kuyo yonke indawo. Okufana namaphansi okhuni oluqinile, indawo yokuqala yomlilo njll. Ikhaya linamagumbi okulala angu-3 ahlome ngokuphelele. Igumbi elilodwa leNkosi, igumbi lendlovukazi elilodwa kanye negumbi eligcwele kanye namawele. Indawo eningi ukuze wonke umuntu alale ngokunethezeka.
4.0 · 8 okushiwo abanye
Ikhaya litholakala kuphela imayela elingu-1 ukusuka enkabeni yedolobha laseCumberland lomlando wezitini lenxanxathela yezitolo, lapho kunezinketho eziningi zokudlela, zokuthenga nezokuzijabulisa, kanye nomzila wesitimela oyingqopha-mlando endaweni yomsele.
Ukugibela ibhayisikili okufushane kakhulu ukuya endleleni yokudonsa i-c&o noma emigwaqweni emikhulu yebhayisikili ye-allegany.
Uhambo olufushane kakhulu ukusuka ekhaya yindawo yamathuna aseRose Hill anomlando futhi amahle. Liyipaki lomlando elihle nelithakazelisayo ongahambahamba kulo. Futhi ibanga elifushane lokuhamba ukusuka ekhaya kunomgwaqo ongokomlando waseWashington, ofaka izithabathaba eziningi eziyingqayizivele zeVictorian ne-Edwardian, futhi indawo enhle yokuhamba ngezinyawo.
Sihlala emabhuloki ambalwa kuphela ukusuka ekhaya ngakho singatholakala ngokushesha. Siyasabela kakhulu futhi senza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono kakhulu. Sijabule kakhulu ukunikeza izincomo zokuhlola izindawo zasendaweni. Sinamanye ama-Airbnb amabili e-Cumberland, ungabheka lawo afakwe ohlwini ukuze uthole umbono othe xaxa wokuthi singababungazi kanjani ngokufunda izibuyekezo eziningi.
Sihlala emabhuloki ambalwa kuphela ukusuka ekhaya ngakho singatholakala ngokushesha. Siyasabela kakhulu futhi senza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono kak…
Hlola ezinye izinketho ezise- Cumberland namaphethelo